FIRONAN’NY VOKA-PIFIDIANAN’NY CENI :: Miha mazava ny fandresen’i Andry Rajoelina • AoRaha
FIRONAN’NY VOKA-PIFIDIANAN’NY CENI Miha mazava ny fandresen’i Andry Rajoelina
Izay ho vokatra ofisialy sisa andrasana. Tsy ho azo ihodivirana ny fandresen’ny kandidà laharana faha-13 Andry Rajoelina tamin’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa, raha ny fironan’ny voka-pifidianana vonjimaika navoakan’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), omaly tamin’ny 6 ora hariva. Mitarika amin’ny taham-bato 55, 04% ny kandidà mitondra ny loko volomboasary raha 44,96% ny an’ny kandidà Marc Ravalomanana, mpifanandrina aminy. Manodidina ny 400 000 mahery kely eo ho eo ny elanelam-bato andresen’ ny kandidà Andry Rajoelina. Efa mananika ny taha 10% io isam-bato mana- saraka ny roa tonta io.
Raha ity voka-pifidianana vonjimaika navoakan’ny Ceni, omaly hariva ity, dia efa mananika ny 21 615 amin’ireo biraom-pifidianana 24 852 manerana an’i Madagasikara no voakirakira. Araka izany dia efa ny 82% -n’ny voka-pifidianana rehetra no efa voarain’ny Ceni, hatramin’ny omaly tamin’ ny 6 ora hariva, ary voka-pifidianana avy amin’ireo birao fandatsaham-bato 3000 eo ho eo sisa andrasana dia ho feno tanteraka ny vokatra etsy amin’ny foiben’ ny Ceni etsy Alarobia.
Vato 2 135 875 amin’ireo vato manan-kery 3 848 655 no azon’i Andry Rajoelina. 1 712 780 kosa ny an’ny kandidà Marc Ravalomanana. Manodidina ny 48% ny tahan’ny fandraisan’anjaran’ireo mpifidy tamin’ iny fifidianana iny.
Tsy mandà fanamarinana
Nanomboka ny alakamisy teo ny fanamarinana sy fampitahan’ ny Ceni an’ireo voka-pifidianana voarainy sy ireo taratasy mirakitra ny voka-pifidianana avy amin’ ireo rantsamangaikany. Nanatrika izany ireo mpikambana eo anivon’ ny komity manohana ny kandidà laharana faha-25 Marc Ravalomanana. Taorian’io fanamarinana io dia voalaza fa tsy nisy fifandisoana teo amin’ny voka-pifidianana teo am-pelantanan’izy ireo sy ny an’ny Ceni. Samy efa manana solontena manara-maso ny fikirakirana ny voka-pifidianana eny an-toerana avokoa ny kandidà roa tonta.
Nohamafisin’ny mpampaka-tenin’ny Ceni Ernest Razafindrabe fa “ misokatra tanteraka ho an’ ireo kandidà mpifanandrina ny Ceni amin’ny fangatahana fanaovana fanamarinana”. “Miangavy azy ireo sy ny mpomba azy ho tony eo am-piandrasana ny voka-pifidianana ihany koa izahay”, hoy izy.
Hatramin’ny omaly, dia voka-pifidianana avy amin’ ireo birao fandatsaham-bato miisa 13 000 no nanaovan’ny Ceni fampitahana. Ny 8 000 amin’ ireo birao fandatsaham-bato ireo no efa vita. Raha tsy misy ny fiovana dia ho feno tanteraka, anio alina, ireo voka-pifidianana vonjimaika mivoaka etsy amin’ny Ceni. Mbola hisy kosa anefa ny fanamarinana an’ireo vokatra vonjimaika ireo mandra-pahatongan’ ny fotoana hanambaràn’ ny Ceni ny voka-pifidianana ofisialy vonjimaika.
FIOMBONAM-BAVAKA NOELY :: Tsy mahafoy an’ireo sahirana i Andry Rajoelina